:: My Little World ::: February 2007
Blogger is on vacation for2weeks....
Posted by Nay Nay Naing at 2/24/2007 03:57:00 AM3comments
www.regdeveloper.co.uk က ပိုစ့်တစ်ခုရဲ့ Title ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားသွားလို့သွားဖတ်ကြည့် လိုက်တော့....
Novell ရဲ့ ထောက်ပံ့မှု့နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ Open Source Project တစ်ခုကို သုံးပြီး Windows developers တွေဟာ VB applications တွေကို ဘာပြောင်းလည်းမှု့ မှ ထပ်မလုပ်ပဲ Linux မှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ရေးထားတာ တွေ့ ရတယ်။ Mono Visual Basic Compiler ကို သုံးပြီးတော့ပါ။ အဲ့ဒီ Mono VB Complier Version 1.2.3 ကို Visual Basic 8.0 နဲ့ရေးထားတာလို့ လည်း အဲ့ဒီ ပိုစ့်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ Linux breakthrough for Visual Basic developers ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
ကျွန်မတော့ အဲ့ဒီ ပိုစ့်ကိုဖတ်ရင်း တွေ့ ရတဲ့ Mono Porject ဆိုတာလေးကို သိချင်သွားလို့Google လိုက်တော့ Mono Project ရဲ့ www.mono-project.com ကို ရှာတွေ့ ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ Mono Project အကြောင်းကို ဒီလို ရှင်းထားတယ်လေ....
ကျွန်မ ဒီနေ့ တစ်နေ့ လုံး အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့အဲ့ဒီ Mono Project Website ကို အသေးစိတ် မဖတ်နိုင်သေး ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သူငယ်ချင်းအများစုက .Net သမားတွေ များတာမို့သူတို့ အတွက် အသုံးဝင်မယ် ထင်တာနဲ့သူတို့အားလုံးကို သိစေချင်လို့ကျွန်မဘလောခ့်မှာ ပိုစ့်တင်လိုက်တာပါ။ တစ်ယောက်ချင်းကိုလည်း ဒီအကြောင်း လိုက်ပြော မနေအားလို့ ပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 2/24/2007 01:47:00 AM2comments
ကျွန်မ တွေ့ မိတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ WebSite တစ်ခု အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ တခြား သူတွေ အတွက်တော့ မသိပါဘူး၊ ကျွန်မ ရဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်တော့ ဒီ WebSite က အလွန် အသုံးဝင်မှာ သေချာ ပါတယ်။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ သူတို့ တွေဟာ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်လေ့ ရှိကြလို့ ပါ။ ... "Gym သွားလိုက်ဦးမယ်၊ အရမ်း '၀' နေပြီလား မသိဘူး၊ Weight ချ ရဦးမယ်၊ အားကစားလေး တစ်ခုခုလုပ်ရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ်... " အင်း.. ပြောရင် ကုန်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေဟာ အရှေ့ ၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်၊ ကမ္ဘာ အနှံ့ မှာ ရှိနေတယ် ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စီက အမြဲ ကြားနေရတဲ့ စကားလေး တွေပါ။ ကျွန်မသိပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ တွေဟာ အလှအပကို ဂရုစိုက်ပြီး အဲ့ဒီ စကားတွေကို ပြောနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်လို့ သာ ဒီလို စကားတွေ ပြောနေကြတာပါ။ အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ကျွန်မတို့ဘ၀မှာ တခြား အရာတွေထက်စာရင် ကျန်းမာရေးကသာ အရေးကြီးဆုံး အရာ မဟုတ်လား။ ကျွန်မတို့ကျန်းမာနေမှသာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် မိသားစုနဲ့ဝေးကွာပြီး တပြည်တရွာမှာ တစ်ယောက်တည်း နေကြ ရတဲ့ ကျွန်မတို့ တွေဟာ မကျန်းမာ၊ ဖျားနာလို့ မှ ပြုစု၊ ယုယမယ့် သူတွေက အနားမှာ မရှိလေတော့ ကျန်းမာရေးကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်သင့်တယ် မဟုတ်လား။
ကျွန်မတွေ့ တဲ့ Revolution Health ဆိုတဲ့ WebSite လေး အကြောင်း နည်းနည်း ပြောပြဦးမယ်။ အဲ့ဒီ Site မှာ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်သူများ အတွက် အလွန် အသုံးဝင်မယ့် Calculator တွေ၊ Assessments တွေနဲ့Trackers အများအပြားရှိပါတယ်။
Revolution Health - Calculator
Calculator Session မှာ ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်၊ Calories၊ အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ၊ အရက်၊ ဆေးလိပ် နဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊ နောက်ပြီး ခုခေတ်မှာ အဖြစ်များနေတဲ့ Heart Attack အတွက် Risk တွက်တာတွေ ရှိပါတယ်။
Revolution Health - Accessments
Assessments Session ကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ Screening, Evaluation, Management နဲ့Pediatric ဆိုပြီး လေးပိုင်းခွဲထားတာ တွေ့ ရတယ်။ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေတွေ ဖြေပြီး ကိုယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံပေးချက်တွေ ရယူလို့ ရပါတယ်။
Revolution Health - Tracker
Tracker Session ကလည်း ကိုယ့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲမပြတ် စောင့်ကြည့်နေနိုင်ဖို့အတွက် အရမ်း အသုံးဝင် ပါတယ်။ နေ့ စဉ် ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Information တွေကို မှတ်ထားပြီး အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ်ဆိုပြီး ရွေးချယ်ပြီး အသေးစိတ် နှိုင်းယှဉ် ကြည့်နိုင်အောင် ဇယားတွေနဲ့လုပ်ပေးထားတာ တွေ့ ရတယ်။ Blood Pressure, Blood Glucose, Body Weight, BMI , Basal Body Temperature, Pregnancy Weight Gain, Exercise Routine, General Mood တွေ ကို မှတ်ထားလို့ ရပါတယ်။ သွားကြည့်လိုက်ရင် ဒါတွေ အကုန်တွေ့ မှာ ဖြစ်ပေမယ့် တချို့ သော သူတွေက သွားကြည့်ဖို့ပျင်းနေမှာ သိနေလို့ဘာတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ အသေးစိတ် ရေးပြနေရတာပါ။ ခုလို ရေးပြမှ သူတို့ တွေအတွက် အသုံးဝင်တယ် ဆိုပြီး သွားကြည့် ဖြစ်ကြမယ် ဆိုတာကို ကျွန်မ ကြိုသိနေတယ်လေ။
ဒီလောက်ဆိုရင် အဲ့ဒီ WebSite ကို ကျွန်မ ဘာလို့ညွှန်းနေရလဲဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ။ တခြား ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်မယ် ထင်တာတွေကိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုပဲ ရှာဖွေကြည့်ကြပါ။ စာတွေ ဖတ်ရလို့ပျင်းနေရင် ဒီမှာ သီချင်းလေး သွားနားထောင်ကြည့်ကြပါဦး။ ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဘလောခ့်လာ အစ်မတွေ၊ ညီမတွေ အတွက် ရည်ရွယ် ပါတယ်။ :) ( ကျွန်မ အတွက်တော့ မရည်ရွယ်ပါဘူး :D)
အဲ့ဒီသီချင်းရဲ့ Mp3 Format ကို လိုက်ရှာတာ မတွေ့ ရလို့ရှာတွေ့ တဲ့ Real Player Steaming File လေးကိုပဲ လင့်ပေးထား ပါတယ်။ ဒီ Version ကို အရင်က တခါမှ နားမထောင်ဖူးပါဘူး။ ဒီနေ့ မှ လိုချင်လို့လိုက်ရှာရင်း တွေ့ လိုက်တာပါ။ ကြိုက်ကြသူလည်း ရှိမယ်၊ သီချင်းကောင်းကို ဖျက်ဆီးတယ် ထင်သူတွေလည်း ရှိကြမှာပါ။ ကျွန်မ အတွက်တော့ ကြားနေကြပုံစံ မဟုတ်ပဲ မြူးမြုးလေးဆိုတော့ တမျိုး နားထောင်လို့ ကောင်းနေပါတယ်။
ဘလောခ့်အလည်လာ မိတ်သဟာ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်၊ စိတ်ကြည်လင်ချမ်းမြေ့ကြ ပါစေ...
Credit to http://www.seasite.niu.edu/Burmese/ for the Song...
Posted by Nay Nay Naing at 2/23/2007 02:00:00 AM3comments
လူရှိန်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ
ယောက်ျားမရှိတဲ့ မိန်းမဟာ၊ မိဘ မောင်ဘွား တစ်ကျိတ်ပင် ရှိသော်ငြားလည်း မတင့်တယ်ဘူးလို့ရှေးရှေးတုန်းက ပြောကြတာ ကြားဖူးတယ်။ ဒီခေတ်မှာရော ဒီလိုပဲလား။ ဟုတ်တယ်လို့ လည်း မထောက်ခံရဲ ပါဘူး။ အဲ့လိုသာ ထောက်ခံမိရင် အပျိုကြီးတွေလာ တိုက်ခိုက်ကြမှာကို ကြောက်ပါတယ်လေ :D ... သိတဲ့အတိုင်း ခုခေတ်က အပျိုကြီးတွေ များတယ် မဟုတ်လား (ကျွန်မကိုတောင် အဲ့ဒီ စာရင်းထဲ သွင်းလို့ရနေပါပြီ)။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီစကားကို ခုခေတ်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် နည်းနည်း ပြောင်းပြီးပြောပြမယ်.. "ကိုယ်ပိုင် Domain name မရှိတဲ့ သူဟာ၊ အီးမေးတွေ ဘလောခ့်တွေ တစ်ကျိတ်ပင် ရှိသော်ငြား မတင့်တယ်ဘူး" ...
အင်း.. ဒီတော့ အားလုံးပဲ တင့်တင့်တယ်တယ် ဖြစ်သွားကြရအောင် ခုချိန်မှာ ဈေးလျှော့ပေးနေတဲ့ Yahoo ကနေ Domain Name တွေ ၀ယ်လိုက်ကြပါလား။ ဟင်း.. ခုမှပဲ လိုရင်းရောက်တော့တယ်။ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး Yahoo က Domain Name ကို တစ်နှစ်ကို $9.95 နဲ့ရောင်းနေရာကနေ ခုဆို ပထမဆုံးတစ်နှစ်စာကို $1.95 နဲ့ဈေးလျှော့ပြီး ရောင်းနေပါတယ်လို့ပြောမလို့ ပါ။
Yahoo - SmallBusiness
တစ်ခါတည်း ဈေးသက်သက်သာသာ နဲ့Domain Name ၀ယ်လို့ ရတဲ့ နောက် Website တစ်ခုကိုပါ ပြောပြချင် ပါတယ်။ 1and1.com ဆိုတဲ့ Site ပါ။ Domain ရော Hosting ပါ ၀ယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဈေး အတော် သက်သာ ပါတယ်။
Comparison Chart - Linux based
Comparison Chart - Microsoft Based
ကိုယ်ပိုင် Domain Name ၀ယ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူများ သွားရောက် ကြည့်ရှု့ဝယ်ယူနိုင်အောင် ကြော်ငြာခ တပြားမှ မရပဲ သတင်းပေးခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ ( ဒါပေမယ့် ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်မိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များ ဒီဘလောခ့်မှာ ကြော်ငြာထည့်ချင်စ်ိတ်တွေ ပေါ်လာရင်တော့ ကျွန်မကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင် ပါတယ်။ :P )
Domain Name ရှိတယ်ဆို WebSite တွေ၊ တခြားဟာတွေ မလုပ်တတ်တောင် ရှိနေတဲ့ ရှိနေတဲ့ ဘလောခ့်လေးတွေကို Redirect လုပ်ပေးပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို Blog Address ပေးမယ့် အစား၊ http://www.YourName.com ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင် လင့်လေးတွေ ပေးနိုင်ကြတာပေါ့။ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ပိုင် WebAddress လေးနဲ့ ဆို လူရှိန်တာပေါ့နော်။
ကိုယ်ပိုင် Domain Name မရွေးခင် ဒါလေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်တယ်။
Other Related Post - How To Choose Your Site Name. (November 2006)
Posted by Nay Nay Naing at 2/22/2007 11:23:00 AM9comments
Singapore Public Holidays 2007
ရှားရှားပါးပါး ၄ ရက် ဆက်ရတဲ့ အားလပ်ရက်လေးတော့ ဘယ်လို မှန်းမသိပဲ ကုန်ဆုံးသွားပြန်ပြီ။ နောက်လတွေမှာ အလုပ်ပိတ်ရက်တွေ မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီ။ CNY Holiday ရဲ့ နောက်ဆုံး မှာ နောက်ထပ် ဘယ်နေ့ တွေမှာများ Holiday ရအုံးမလဲ ဆိုတာကို အသေအချာ လိုက်ကြည့်မိပြီး သကာလ March, June, July, September လတွေမှာ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီ လတွေမှာ ရုံးပိတ်ရက်တစ်ရက်မှ မရှိဘူးလေ။
ဒီနိုင်ငံရဲ့ Public Holiday က အတော်နည်းတယ်။ တစ်နှစ်လုံးမှာမှ ၁၁ ရက်ပဲရှိတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ တခြားနိုင်ငံတွေဆို ဟိုလူအတွက် ဟိုနေ့ ၊ ဒီလူ့ အတွက် ဒီနေ့ ဆိုပြီး ပိတ်တာတွေလဲ မရှိဘူး။ တော်တော် ကျေးဇူး မသိတတ်တဲ့ နိုင်ငံလို့ဆိုရမယ်။ သူတပါး ကျေးဇူးကို အောက်မေ့၊ သတိရ၊ သိတတ်ခြင်းဟာ မင်္ဂလာတရားတပါး ဆိုတာ သူတို့ မသိဘူးနဲ့တူပါတယ်။ အဲ့လိုသာ ပြောကျစတမ်းဆို ကျွန်မတို့နိုင်ငံလည်း သူ့ ကျေးဇူး မသိတတ်တဲ့ နေရာမှာ ဒီနိုင်ငံနဲ့ဘာများထူးပြီး ကွာခြားပါတော့ မလဲ။
အင်း... ဒီနိုင်ငံမှာ ကောင်းတာဆိုလို့Holiday က Sunday နဲ့ထပ်သွားတယ် ဆိုရင်၊ နောက်တစ်ရက် အစားပြန်ပြီး ရုံးပိတ်ပေးတာပဲ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ပုံမှန်အလုပ်တွေမှာဆို Annual Leave ကလည်း တစ်နှစ်လုံးမှာမှ ၁၂ ရက်ပဲ ရတယ်။ တော်တော် အလုပ်လုပ်လို့မကောင်းတဲ့ နိုင်ငံပဲ။ ဒါဆိုဘာလို့ လုပ်နေသေးလဲလို့အရွဲ့ တိုက် မမေးကြပါတယ်။ ရွေးစရာ မရှိလို့ ပါ။ ပျော်ရမှာ မနေရ၊ တော်ရာမှာ နေရ ဆိုတဲ့ စကားကလည်း ရှိတယ် မဟုတ်လား။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အလုပ်လုပ်မှ ပိုက်ဆံရမယ်ဆိုရင် Public Holiday များ၊ Annual Leave များ၊ တနေ့၈ နာရီနဲ့၅ ရက် လုပ်ရပြီး၊ လခများများရတဲ့ ကိုယ့်မိသာစု အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ လည်းနီး၊ ကိုယ်လည်း စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မယ့်နေရာမှာပဲ အလုပ်လုပ်ချင်တာပေါ့။
ဒါနဲ့ကျွန်မတို့အမိမြန်မာပြည်မှာဆို များလိုက်တဲ့ Holiday တွေ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကတင် သတင်းတွေမှာ သင်္ကြန် အားလပ်ရက်ကို ၁ ရက်တိုးပြီး၊ ၁၀ ရက် ပြောင်းသတ်မှတ်လိုက်ပြီ ဆိုတာ ရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အဲ့လို ပိတ်သင့်တဲ့ ရက်မပိတ်ပဲ အဲ့ဒီ ရက်မှာမှ ၁ ရက် တိုးပိတ်တဲ့ ကိစ္စကို ကျွန်မကတော့ ဘာမှ မပြောလိုပါ။ ပြောလည်း ထူးမှာမှ မဟုတ်တာ။ စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ ဒီ အစိုးရသာ ဆက်မြဲ နေမယ်ဆို နောက်ပိုင်းကြာလာရင် အကြိုရဲ့ အကြိုတွေကို ဆက်ပိတ်ရင်းကနေ April (သင်္ကြန်) မှာ ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတာ 1st April က စတာဆိုပြီးတော့ ဖြစ်လာမလားလို့ ပါ။ အင်း... အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူများတွေ ဘာတွေပြောပြီး၊ ဘယ်လို မြင်ကြလည်း သိချင်ရင် မြန်မာ ဘလောခ့်တွေမှာ လိုက်ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ ဘလောခ့်တွေမှာ သူများရေးထားတဲ့ အမြင်လေးတွေ လိုက်ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ အတော်လေး ကောင်းတယ်။ အချိန်အားလေးတွေများ အလုပ်မှာရရင် သွားဖတ်ကြည့် ကြပါ။
မြန်မာ နှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက် - Soe Moe
ရုံးပိတ်ရက်များထပ်မံတိုးလိုက်ပြီ - Mr Programmer
ပိတ်ရက်များနှင့် မြန်မာပြည် - May Dar Wii
Holidays - Thu Hnin See
Posted by Nay Nay Naing at 2/21/2007 11:24:00 AM3comments
ကျွန်မ အရင်က မောင်စိန်ဝင်း( ပုတီးကုန်း) ရဲ့ ၀တ္ထုတွေကို အနည်းအကျဉ်း ဖတ်ဖူးပေမယ့် ကဗျာတွေကိုတော့ အလေးထား မဖတ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဘာလို့ လည်း ဆိုတော့ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ဟာ ကဗျာတွေ ရေးရင် အချစ်ကဗျာတွေပဲ ရေးတယ်လို့ထင်ခဲ့မိလို့ ပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့ က အချစ်ကဗျာတွေကို အများအားဖြင့် သိပ်ပြီး ခံစားလို့မရပါဘူး။ ဒီလအတွင်းမှာတော့ မမွန်က ဖိုရမ်ထဲမှာ ကဗျာတွေ တင်ပေးမှပဲ ဖတ်ကြည့်ရင်းက မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)ဟာ အချစ်ကဗျာတွေကြီးပဲ ရေးတာ မဟုတ်မှန်း သိခဲ့ရတယ်။ နောက်ပြီး သူရေးတဲ့ ဒီကဗျာလေးကို နှစ်သက်သွား မိတယ်။
ဘ၀ တိုးတက်မှု့ ကို ရှားရင်း၊ တစ်နေရာမှာ တစ်နေရာ ခရီးဆက်ရင်း လိုရာ ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် ကြိုးစားနေကြတဲ့ ကျွန်မတို့အတွက် ဒီကဗျာလေးက အားအင်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရီး မထွက်ခင်မှာ လမ်းခရီးမှာ မောပန်းမှု့ တွေ သက်သာစေဖို့လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှု့ လေးတွေတော့ အတက်နိုင်ဆုံး လုပ်သွားကြရအောင်လား။
ကြမ်းမည် ကောင်းမည်၊ ငါသည်မတွေ့။
သာမည်၊ဆိုးမည် ၊ ငါသည် မတွက်။
ဒီကဗျာလေးနဲ့အတူ မမွန်က ဒီလို ရေးထားပါတယ်
" ဒီကဗျာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတွက် ရည်စူးပြီးတင်ပါတယ်..... နေရာသစ်ဆီသွားမည့်သူများ.. သွားနေဆဲသူများ.. အတွက်လည်း.. ရည်ရွယ်ပါသည်.... အင်အားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါစေ "
နေရာသစ်သို့ သွားမယ့် မမွန် အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ :)
Posted by Nay Nay Naing at 2/21/2007 11:24:00 AM2comments
Daylight Saving Time (DST) စတော့မယ်ဆိုတာ သတိရလို့ဘယ်ရက်က စပြီးပြောင်းမှာလဲဆိုတာ သိချင်လို့လိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့ ဒီနှစ် 2007 က စပြီး US DST အချိန်တွေ ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ England မှာရော ဘယ်လိုလဲဆိုတာ ထပ်ပြီး စပ်စုလိုက်တော့ Europe DST တွေတော့ မပြောင်းဘူး လို့သိလိုက်ရပါတယ်။
အရင်ကတုန်းကဆို US DST က 1st Sunday in April to last Sunday in October ပါ။ ခုတော့ DST ပိုကြာသွားပါပြီ။ Energy Policy Act of 2005 အရ US DST ဟာ 2007 ကနေစပြီး.... 2:00 AM on 2nd Sunday in March to 2:00 AM on 1st Sunday in November ဖြစ်သွားပါပြီ။ Europe DST ကတော့ မပြောင်းမလဲ အရင်အတိုင် 1:00 Am on last Sunday in March to last Sunday in October အထိပါပဲ။
သူတို့အဲ့လို ပြောင်းတာ အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့်၊ ကျွန်မတို့IT လောကမှာ ဘာတွေ affect ဖြစ်ပြီး၊ ဘာတွေုပြဿနာ တတ်အုံး မလဲ မသိဘူး။ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပဲ IT လောက ဆိုတာ ဘာမှ မပြောင်းရင်သာ ဘာမှ မဖြစ်သလိုရှိတာ၊ မလှုပ်လိုက်နဲ့တစ်ခုခု ဖြစ်ဖို့ က သေချာနေသလောက်ပါပဲ။ ကျွန်မစိတ်ထင် အဓိက Update လုပ်ဖို့ တွေ လိုမှာက Microsoft Servers တွေနဲ့Database တွေ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မ အခုရှိနေတဲ့ တိုင်ပြည်မှ DST မှ မရှိ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် DST ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ IT Field က လူတွေ ဘာတွေ ပြောင်းဖို့ လိုလဲ ၊ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုသလဲဆိုတာ သိချင်ရင် ဒီအောက်က Link တွေမှာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
U.S. DST Changes for Microsoft Environment
U.S. DST Changes for Sun Java Environment
တကယ်တော့ Daylight Saving Time (DST) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျွန်မ စပြီး ကြားဖူးခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်ကျော်ကပါ။ ကျောင်းတွေ စဖွင့်တာ September ဆိုတော့ နိုင်ငံခြားရောက်ပြီး နောက်တစ်လ အကြာ October လ မှာ Daylight Saving Time End အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်လို့1 Hour ရှေ့ တိုး ရမယ် ဆိုပြီး ကျောင်းကနေ email ပို့ တာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ တော်တော် ထူးဆန်းသွားတယ်။ သိပ်ရှုပ်တာပဲလို့ လဲ ထင်သွားတယ်။ ဒီလို အချိန်တွေ ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ လုပ်တယ် ဆိုတာမျိုးကို အရင်က တစ်ခါမှ မကြားခဲ့ဖူးတာ။ နောက်တော့ နောင်တော်ကြီးတွေ ရှင်းပြတာရယ်၊ Internet မှာ လိုက်ရှာ ဖတ်ကြည့်မိတာတွေရယ်၊ ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ရတာတွေရယ်ကြောင့် သူတို့ နိုင်ငံတွေမှာ ဘာလို့ဒီလို အချိန်တွေ ရွှေ့ ဖို့ လိုတာလဲ ဆိုတာကို သိလာခဲ့ပါတယ်။
သူတို့တိုင်းပြည်တွေ မှာက Spring မှာဆို နေစောစောထွက်ပြီး၊ Fall ရောက်ပြီဆို နေထွက်ချိန် နောက်ကျ ပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ နိုင်ငံမှာ Spring ရာသီ ရောက်ပြီဆို နာရီကို 1 Hour နောက်ဆုတ်ပြီး 1 နာရီစော ထကြပါတယ်။ အဲ့ Fall ရောက်ပြီ ဆိုရင်တော့ 1 Hour ရှေ့ပြန်တိုးလိုက်ပြီး ပုံမှန်အချိန် ဖြစ်အောင် ပြန်ရွှေ့ လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ မှတ်မိအောင် "Spring Forward , Fall Back" လို့ မှတ်သားခဲ့ဖူးတယ်။
DST ဘယ်ခေတ်က စပြီး၊ ဘယ်လို ၊ ဘာကြောင့် ဖြစ်လာတယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ဘယ်နေရာတွေမှာ DST ရှိပြီး၊ ဘယ်နေရာတွေမှာတော့ DST မရှိဘူး ဆိုတာတွေ အသေးစိတ်ကို သိချင်တယ်၊ ဗဟုသုတ ရအောင် ဖတ်ချင် တယ်ဆို Webexhibits - Day Light Saving မှာ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားတာကို သွားကြည့်နိုင် ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/20/2007 01:42:00 PM5comments
တချို့ တချို့ သော ကိစ္စများကြောင့် ကျွန်မ ဒီလို အော်ဟစ်ချင်နေတယ်...
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ ရှိတယ်..
ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ....
သြော် ... လောကကြီမှာ .. ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/20/2007 01:18:00 PM5comments
For Chinese SPRING New Year!!!
Wan Ser Ru Yi...
ပထမဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်မ တရုတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ပိတ်ရက် တရုတ်နှစ်ကူး ၄ ရက်ရတော့ သူ့ ကျေးဇူးကို သိရမယ်လို့တွေးမိပြီ့းကြားဖူးနားဝ ရှိတာလေးတွေ လျှောက်ရေး လိုက်တာပါ။ :D.. တရုတ်နှစ်ကူးက အလုပ်ပိတ်တာပဲ ရှိတယ်၊ ရှိသမျှဆိုင်တွေ အကုန်နီးပါးပိတ်လို့ ကျွန်မကတော့ တခြား အလုပ်ပိတ်ရက်တွေလောက် နှစ်သက်မိခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒီပိုစ့်က ပုံလေးတင်ဖို့အတော်လေး ရွေးလိုက်ရသေးတယ်။ တရုတ်တွေက အနီရောင်ကြိုက်ကြပေမယ့်၊ ကျွန်မကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အစိမ်းရောင်နောက်ခံပုံပဲ ရွေးမိတယ်။ တရုတ်နှစ်သစ်က ၀က်နှစ်ဆိုတော့ ၀က်ပုံလေးပါတာပေါ့။ တခြားလူမျိုးတွေ ရဲ့ နှစ်ကူးတွေမှာ ရွှေငွေပုံတွေက အဲ့လောက် အရေးမပါပေမယ့်... တရုတ်လူမျိုးတွေ အတွက်တော့ အရမ်းအရေးပါလို့ရွှေတွေ ပါတာလေးကို ရွေးလိုက်တယ်။ ကျွန်မ သိသလောက်တော့ တခြားလူမျိုးတွေ ထက်စာရင် တရုတ်လူမျိုးအများစု စိတ်အ၀င်စားဆုံး ၊ ဘ၀မှာ အရေးအကြီးဆုံးလို့ ထင်တာက ပိုက်ဆံရှာဖို့မဟုတ်လား။ သူတို့ ထင်တာ မှားတော့လည်း မမှားပါဘူးလေ။ ကဲ... လာလည်သူ တရုတ် လူမျိုးတွေအတွက် ဆုတောင်းပေး လိုက်ဦးမယ်။
Hopefully this year will bealucky, prosperous and peaceful one for everyone.
Let's earn more this year!!!
Posted by Nay Nay Naing at 2/18/2007 08:54:00 AM3comments
ချစ်သူရဲ့ သီချင်း လက်ဆောင်
အကြင်နာ စကားတွေ အများအပြား မဆိုတတ်ပေမယ့်...
ဘ၀နှစ်ခုထပ်တူဖြစ်အောင် အမြဲတမ်းစဉ်းစား လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့...
ယုံကြည်ပါလို့ကတိသစ္စာစကားတွေ ဆိုလေ့မရှိပေမယ့်...
သ၀န်တိုဒေါသတွေနဲ့့ပူလောင်မှုသောကတွေ မပွါးရအောင် နေထိုင်ပေးတဲ့ ...
တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေ အလွန်အကျွံ မဆိုတတ်ပေမယ့်
အကြင်နာ အပြုံးများနဲ့နားလည် ခွင့်လွှတ်ရင်း လိုရာပုံသွင်းစကားဆိုတတ်တဲ့
ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုသာ အမြဲ ဆောင်ကျဉ်းပေးမယ် မဆိုတတ်ပေမယ့်..
နားထောင်တတ်တဲ့နားတစ်စုံ၊ ချိုသာစကားတချို့ နဲ့နှလုံးသားကို အေးချမ်းစွာညှို့ယူတတ်တဲ့
ဘ၀ပြဿနာတွေ အကုန်ဖယ်ရှားပေးမယ်လို့အပိုစကားတွေ ဆိုလေ့မရှိပေမယ့်
ဒုက္ခတွေကို မျှဝေခံစားရင်းနဲ့အနာဂတ်သစ်အတွက် တဖန်အားတင်းစေတတ်တဲ့...
( မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်မ ကဗျာရေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်မသိသော ကျွန်မ၏ချစ်သူအကြောင်းကို ရေးသားထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ )
Labels: Day, Memory, Thoughts
Posted by Nay Nay Naing at 2/14/2007 10:29:00 PM5comments
ဒီနေ့"Valentine's day " ချစ်သူများနေ့ ... ချစ်တတ်သူများ ရဲ့ အမှတ်တရနေ့ .
ကျွန်မ ဒီနေ့အလုပ်ကို အသွား လမ်းမှာထဲက လက်ဆောင် ပန်းစည်းတွေ၊ ပန်းခြင်းလေးတွေ သယ်ယူ သွားသူ အများအပြားကို တွေ့ ခဲ့ရတယ်။ အလုပ်ရောက်ပြန်တော့လည်း Happy Valentine's day ဆိုပြီး IT Management ကနေ Chocolate လေးတွေ လာပေးလို့စားလိုက် ရသေးတယ်။ အဲ.. နေ့ လယ် ထမင်းစား ဆင်းချိန်ကြတော့လည်း ပန်းတွေ၊ လက်ဆောင်တွေ နဲ့ ကြည်နူးနေသူတွေကို တွေ့ ရပြန်တယ်။ နောက်.. နေ့ လယ်ခင်း နည်းနည်း အားတာနဲ့Websites တွေလျှောက်ကြည့်၊ ဘလောခ့်တွေ လိုက်ပြီး ဖတ်ဖြစ်တော့လည်း Valentine's Day နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ၊ ချစ်သူတွေအတွက် တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်လေးတွေကို တွေ့ ခဲ့ ရပြန်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ညနေ အိမ်အပြန် လမ်းမှာ ကြတော့လည်း ရထားပေါ်မှာ ကြည်နူး ပြုံးရွှင်နေတဲ့ သူတွေ၊ စုံတွဲတွေကို တွေ့ ခဲ့ရ ပြန်တယ်။ ကျွန်မလည်း သူတို့ တွေကို ကြည့်ရတာ သဘောကျလို့နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးမိ သေးတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ခင်မှု ကို ပြတဲ့ အရာတိုင်းဟာ မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံလို့မြင်ရတာ၊ ဖတ်ရတာ၊ ကြားရတာ ကြည်နူးစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
ချစ်တတ်သူတွေ အားလုံး အတွက်...
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး..
ခွင့်လွှတ် နားလည်မှု့အပြည့်နဲ့ ..
အမြဲ ထာဝရ .. ချစ်ခင်နိုင်ကြပါစေလို့ ..
တခဏတာ မချစ်ကြဘဲ.. တစ်ဘ၀စာ ချစ်ခင်နိုင်ကြပါစေ။
Labels: Day, Music
Posted by Nay Nay Naing at 2/14/2007 09:04:00 PM3comments
ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ရပြီး မှတ်မိနေတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် နဲ့ဆိုခဲ့ရတဲ့ သီချင်းလေး ..
(ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တပ်မတော်ဖွဲ့ ဘို့ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်၊
တကယ်ပဲ အသက်နဲ့ လဲလို့ဆင်းရဲ ဒုက္ခခံကာ ကြံစည်တယ်၊
သူရဲကောင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်တွေရယ်)၂
ငါတို့ ဗမာပြည် မိဖတိုင်း ကရယ်၊ ဗိုလ်အောင်ဆန်းလို သူရဲကောင်း မွေးရမယ်၊
ငါတို့ ဗမာပြည်ဝယ် မိဖအပေါင်းတို့ ကကွယ်၊ အာဇာနည်အစစ်ကို ရှိဖို့ မွေးရမယ်၊
သြော်........ ဘုရင့်နောင်နဲ့ရာဇာဓိရာဇ်တို့ လို..
မင်းရဲကျော်စွာ ပမာပုံဆောင် အလောင်းဘုရားတို့ လိုကွယ်...
ဗမာတိုင်း ဗမာမျိုး အားကိုးလောက်ပေတဲ့ ...
မကြောက်တမ်း မရွံ့ တမ်း .. ဗမာတွေ အောင်ပန်းဆွတ်ကြ ရှာလေတယ်။
(ရာဇဝင် အတ္ထုပ္ပတ္တိလဲ ရှိရမယ်၊ မော်ကွန်းလဲ ထိုးလောက်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းရယ်)၂
တိုင်းပြည်ကျိုး စွန့် ခဲ့တဲ့ များ ဇာနည်နွယ်၊ လွတ်လပ်ဖို့ တို့ များကို ကျွန်တွင်းမှကယ်၊
တို့ ဗမာတွေ စိုးမိုးဖို့ မျှော်ကြရှာလို့ ပေါ်လာတယ်။
ဗမာနိုင်ငံ .... ထူထောင်ရန်နဲ့ မျိုးရိုးမတိမ်အောင် ကြံဆောင်လေတယ်၊
နေမျိုးသာကီ ဗမာပြည် လက်ရုံး....ဗမာနိုင်ငံလုံး ထင်ပေါ်စေတယ်၊
စိတ်အားထက်သန် မာန်ကိုမလျှော့ တဲ့ ..
ငါတို့ လူမျိုးတန်ခိုးရှိဘို့ သူရဲကောင်းတွေ စုံညီတယ်၊
တကယ်ပင် ... သတိုး မဟာဗန္ဓုလနှယ် ..စွမ်းသတ္တိ ရာဇဝင် ပြောင်တယ်၊
သားကောင်းများလို့ခေါ်ရလောက်ပေတယ်..
ဥဒါန်းတွင်ရစ်စေဖွယ်.. ဗမာသူရဲကောင်း အပေါင်းတွေရယ်
Labels: Day, Music, Poem
Posted by Nay Nay Naing at 2/13/2007 05:04:00 PM3comments
ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေလယ်ခင်းမှာ အိပ်လို့ ကောင်းနေတုန်း မိုးရွာသံလိုလို အသံတစ်ခု ကြားခဲ့ရတယ်။ အရမ်း အိပ်ချင်နေတော့ အိပ်မက်ထဲမှာပဲ မိုးရွာနေတာလား၊ အပြင်မှာပဲ မိုးတွေရွာနေတာလား မကွဲပြားဘူး ဖြစ်နေ ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ မအိပ်ခင်က အရမ်းပူနေတာကို သတိရသွားလို့ ၊ ကြားနေရတဲ့အသံတွေ ဘယ်ကလာတာလဲ သိချင်စိတ်နဲ့စူးစမ်းလိုက်တော့.. ကျွန်မရဲ့ အခန်းထောင့် အဲယားကွန်းကနေ ရေတွေကျလို့ထွက်လာတဲ့ အသံတွေမှန်း သိလိုက်ရတယ်။
အရမ်းအိပ်ချင်နေတာနဲ့အဲယားကွန်ကို သွားမကြည့်တော့ပဲ ဆက်အိပ်နေဖို့ကြိုးစားမိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနေရာ၊ အဲယာကွန်း အောက်မှာ အမြဲ ဖွင့်ထားလေ့ရှိတယ့် ကျွန်မရဲ့ ကွန်ပြူတာကို သတိရသွားလို့ဆက်မအိပ်နိုင်တော့ပဲ ထလိုက်ရတယ်။ သွားကြည့်လိုက်တော မော်နီတာကို ရေတွေ အတော်လေး စိုနေပါပြီ။ CPU ကိုတောင်မှ ရေတွေ စင်နေပြီ ဆိုတာ တွေ့ လိုက်ရတယ်။ ဒီတစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ လေးတော့ အိမ်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်၊ အနားယူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို ဖျက်လိုက်ရပြီး.... တနေကုန် အခန်းထဲက ပစ္စည်းတွေ ဟိုပြောင်း ဒီရွှေ့ ၊ ဟိုရှင်း ဒီရှုပ် နဲ့ကျွန်မ အလုပ်များသွားခဲ့ ရပါတယ်။
အင်း... ဒီတစ်ပတ် အားလပ်ရက်မှာ ကျွန်မ မနားမယူလိုက်ရပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ ကွန်ပြူတာလေးကတော့ ရေချိုးပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့အလုပ်မလုပ်တော့ပဲ ခဏတာမျှ အနားယူသွားပါကြောင်း သတင်းစကား ပါးချင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/12/2007 11:24:00 AM2comments
ဆုံဆည်းဖို့ဆိုတာ မဝေးပါ အကိုနဲ့မမ။
အကိုနဲ့မမ အမြဲလက်တွဲနိုင်ပါစေ... ။
ကျွန်မတို့ ရဲ့ အွန်လိုင်း ညီမလေးတစ်ယောက်က ကျွန်မတို့အတွက် ပေးတဲ့ လက်ဆောင် တစ်ခုပါ။ ဒီကဗျာလေးအတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေးရေ။ ကြိုးစားပါ၊ ညီမရဲ့ အိပ်မက်တွေ တနေ့ မှာ ပြည့်စုံလာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ အစစ အရာရာ အားလုံး အဆင်ပြေ ကံကောင်းပါစေ။
Posted by Nay Nay Naing at 2/12/2007 10:14:00 AM5comments
ကိုကျော်ဇင်ဝင်း နှင့် မစုစုမာ
ချစ်ခြင်း မေတ္တာအပြည့်နဲ့ဘ၀တစ်ခုကို အတူတည်ဆောက်ကြမယ့်
သူငယ်ချင်း ကိုကျော်ဇင်ဝင်း နဲ့ချစ်ဇနီးချော မစုစုမာတို့နှစ်ယောက်
ရာသက်ပန်ရိုးမြေကျ အပူပင်ကြောင့်ကြခြင်းကင်းစွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေ။
ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်း ရဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးအလှူ ရှိလို့သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မ ရဲ့ သူငယ်ချင်း တော်တော်များများ အိမ်ထောင်ပြုသွားကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ မင်္ဂလာဆောင်မှ ကျွန်မ သွားခွင့် မကြုံခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ သွားခဲ့တဲ့ ပွဲဟာ ကျွန်မ ဘ၀မှာ ပထမဆုံးသွားဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ မင်္ဂလာပွဲပါ။
ဒီနေ့ ပွဲမှာ ကျွေးတဲ့ ဒန်ပေါက်က တော်တော်လေး စားကောင်းပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ကျွန်မ ရဲ့ သူငယ်ချင်း တချို့ ဟာ သူတို့ ရဲ့ လူပျိုကြီးဘ၀တွေကို စွန့် လွှတ်တော့မယ်လို့ကြွေးကြော်နေကြ ပါတယ်။ ဘယ်သူငယ်ချင်းရဲ့ ပွဲကိုများ နောက်ထပ်သွားစားခွင့် ကြုံရဦးမလဲ သိပါဘူး။ ဒီနေ့ မှာ တခြား သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သူရဲ့ မွေးနေ့ ပွဲ ဖိတ်ထားပေမယ့် သွားခွင့် မရလိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်းရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကိုတော့ တက်ချင်ပါသေးတယ်။ :D သူငယ်ချင်းတွေ ရန်ကုန်မှာလည်း မင်္ဂလာပြန်ဆောင်ချင် ဆောင်ကြပါ၊ ဒါပေမယ့် ဒီမှာလည်း နောက်တစ်ခေါက်တော့ ထပ်ကျွေးကြပါဦလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/11/2007 01:27:00 PM3comments
Irrawaddy - ဘဝရုပ်ပုံလွှာကဏ္ဍ
ပုဂံချစ်တဲ့ ဆရာကြီးလု(စ်) - တင်မိုး
သူချစ်တဲ့ ပုဂံမြေကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက မဟာမိတ်တပ်တွေက ဗုံးကြဲ မီးလောင်တိုက် သွင်းဖို့ ကြံစည် နေခိုက် ဆရာလု(စ်)က ဒေလီမဟာမိတ်စစ်ဌာနချုပ်သို့ စာရေး မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တဲ့ အတွက် ပုဂံစေတီ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ ကမ္ဘာစစ်မီးလျှံမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဆရာမင်းသုဝဏ်က "ပုဂံနှင့်ဝေဠု" ဆိုတဲ့ ကဗျာဖွဲ့ပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ပုဂံနှင့် ဝေဠု (မင်းသုဝဏ်)
ဒီအထက်က ကဗျာလေးပါတဲ့ ဆောင်းပါး (ပုဂံချစ်တဲ့ ဆရာကြီးလု(စ်) - တင်မိုး)ကို ဖတ်ရတဲ့ အချိန်မှာ ...
ကျွန်မတို့ အားလုံး ရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ် ကောင်းတဲ့ ပုဂံက ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် တွေဟာ နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်ရဲ့ တန်းဖိုးထားတတ်မှု့ ကြောင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းမှာတောင် ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးမှု့ မရှိခဲ့ပေမယ့်... ခုချိန်ရောက်မှသာ ရှေးဟောင်း အမွေးအနှစ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို နားမလည်သူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ဖျက်ဆီးခံနေရ ပါလားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ငယ်ငယ်ကသာ တခါတခေါက် ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရှေးရှေးတုန်းက ပုဂံကို အခွင့်ရရင် နောက် တစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားကြည့်ချင်စိတ် ရှိပေမယ့် ခုခေတ်မှာ လုပ်ထားတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု့ တွေကို လက်သင့်မခံနိုင်လို့ကြည့်ချင်စိတ်လည်း မရှိ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံး တစ်ခေါက် လောက်တော့ ထပ်ရောက်အောင် သွားပါဦးမယ်။ ပုဂံကို ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ
"မကြည့်ချင်တာတွေကို မမြင်နိုင်၊ ကြည့်ချင်တာတွေကိုသာ ကွက်ပြီး မြင်နိုင်တဲ့ မျက်စိလေးတွေများ ရှိရင်" သိပ်ကောင်းမှာပဲ လို့တွေးနေမိပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/10/2007 12:11:00 AM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 2/09/2007 11:14:00 PM0comments
ကျွန်မ နေမကောင်းတာ နဲ့ဒီရက်ပိုင်း ရေးမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားထားတာလေးတွေတောင် မရေးဖြစ်ဘဲ သူများရေးတာတွေလောက်သာ လိုက်ဖတ်ဖြစ်နေ ခဲ့တယ်။ ခုလည်း နေလို့ ကောင်းပြီးလားဆိုတော့ သိပ်တော့ မကောင်းသေးပါဘူ။ ဒါပေမယ့် ဘလောခ့်ရေးဖို့ လောက်တော့ အားပြန်ရှိလာပြီး ပြောရမယ်။ ဒီနေ့ တော့ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဖတ်မိတာလေး တစ်ခု ပြန်ရေးလိုက်ဦးမယ်။ ဖိုရမ်မှာ osprey ဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီး ရေးပေးလို့သိလိုက် ရတာလေးပါ။
ဒီ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ မှာ Observation Wheel တစ်ခု တည်ဆောက်နေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ Singapore Flyer လို့ နာမည်ပေးထားပြီး လန်ဒန်က London Eye ထက် မြင့်တယ်ဆိုပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ နေသူတွေ သိပြီးသား ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ သတင်းဆို သူငယ်ချင်းတွေ ပြောမှ၊ ဒါမှမဟုတ် ဖိုရမ်မှာ တစ်ယောက်ယောက် ရေးထားမှပဲ သိတာများတော့ ဒီအကြောင်းကို ခုရက်ပိုင်းမှပဲ သိပါတယ်။
Singapore Flyer ကို စတင် လုပ်ဆောင်နေတာ ၂၀၀၀ လောက်ထဲကလို့ သိရပါတယ်။ အတော်ကြာပါပြီ။ ပထမဆုံး Plan ချထားတာက ၂၀၀၅ နှစ်ကုန်လောက်မှ ပြီးဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သူတို့ လည်း ကျွန်မတို့ တွေ အလုပ်လုပ်သလိုပဲ Delay ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ နှစ်ဦးပိုင်းမှ ပြီးနိုင်မယ်လို့ရေးထား ပါတယ်။ သတင်းတွေ အရတော့7February 2008 မှ ပထမဆုံး visitor တွေအတွက် ဖွင့်လှစ်မယ် သိရတယ်။ တကယ် ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ အဲ့ဒီ အချိန် အထိ စောင့်ကြည့်ရမှာ ပါပဲ။ ပုံလေးတွေ ကြည့်တာ ၊ Video လေး ကြည့်မိ သလောက်တော့ အတော်လေး လှပါတယ်။
[View Large Photo]
တိုးရစ်တွေကို စွဲဆောင်ဖို့တည်ဆောက်တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီ အပေါ်ကနေ ကြည့်ရင် စင်္ကာပူတစ်နိုင်ငံလုံး၊ မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွေကို မြင်ရမယ်လို့ရေးထားတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဆောက်နေတာလဲ ဆိုတော့ နောက်တချိန်မှာ စင်္ကာပူရဲ့ DownTown ဖြစ်လာမယ့် Marina Bay မှာလို့သိရပါတယ်။ ခု လက်ရှိ DownTown ကတော့ Orchard ဖြစ်မယ်နဲ့ တူတယ်။ တကယ်တော့ Orchard ဆိုတာလည်း ဈေးဆိုင်တွေက လွဲရင် ဘာမှ ရှိတဲ့ နေရာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီမှာက ဧည့်သည်လာရင် ပို့ စရာ ထူးခြားထင်ရှားတာဆိုလို့Sentosa ကလွဲရင် တခြားဘာမှ မရှိတာဘူးဆိုတော့၊ Singapore Flyer ဖွင့်ပြီဆို ဧည့်သည်လာရင် လိုက်ပို့ စရာ တနေရာ တိုးတာပေါ့လေ။
Singapore Flyer တပတ်ပြည့်အောင် လည်ဖို့အတွက်ဆို 37 Minutes ကြာမယ် ပြောတယ်။ ပထမ တစ်ခေါက် တက်ကြည့်တဲ့အခါ အထူးအဆန်း ဖြစ်နေမှာပါ၊ နောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ တခြားနိုင်ငံက ဧည့်သည်တွေ လာတိုင်း လိုက်ပို့ ရလို့ ၊ အဲ့ဒီဟာကြီး ခဏ ခဏ တက်ကြည့်ဖြစ်လာတဲ့ခါ 37 Minutes ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ တော်တော်ကြာပြီး၊ တော်တော့်ကို ပျင်းဖို့ ကောင်းမယ် ထင်မိ ပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း တချို့ဧည့်သည်တွေကို သူတို့ ဟာသူတို့တက်ကြည့်ပါ ဆိုပြီး တင်လွှတ်လိုက်လို့ ရနိုင်ပေမယ့်၊ တချို့ လူတွေနဲ့ကြတော့ ကိုယ်ပါ သူတို့ နဲ့အတူ လိုက်တက်ကြည့် ပေးဖို့ လိုတယ် မဟုတ်လား။
Singapore Flyer အကြောင်း အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ ကြည့်ချင်ရင် Singapore Flyer Official Site မှာ သွားကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/08/2007 05:11:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 2/06/2007 12:19:00 PM6comments
ဒီကဗျာလေးကို ကူညီရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ ကိုသူရိန်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တသသ မြင်ယောင်နေရုံမှ အပ
ဇာတိ ဒီမှာ ဇာတ်ဆုံးပြီ
သူ ဆိုးခဲ့ တေခဲ့သမျှ
၉။ ၆။ ၉၉ နေ့က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ကိုဖိုးထင်ရဲ့ ၁၁။၆။ ၉၉ အသုဘကအပြန်
၁၂ ဇွန် ၁၉၉၉ စနေနေ့ နံနက်ခင်း
Posted by Nay Nay Naing at 2/04/2007 10:23:00 PM2comments
August 28, 1963, the Lincoln Memorial, Washington D.C.
Text, Audio and Vedio
I Have A Dream - Common [Full Lyrics]
From the Freedom Writers Flim
Posted by Nay Nay Naing at 2/03/2007 10:51:00 AM0comments
စည်း - ၀ိုင်ဝိုင်း
IC Show အခွေ စထွက်လာတော့ ကျွန်မကို ကိုဇာနည်က နားထောင်ကြည့် ဆိုပြီး ဒီသီချင်းလေး ပို့ ပေး ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သိပ်နားမထောင်ဖြစ်ပေမယ့် ဟိုရက်ပိုင်းကတော့ ဒီသီချင်းလေးကို အစ်ကိုကြီး ကိုအော်လံမောင်ရဲ့ ဇန်န၀ါရီလအတွင်း ခံစားနားထောင်ဖြစ်သော မြန်မာသီချင်းများ ပိုစ့်မှာ တွေ့ ပြီး ပြန်နားထောင်ဖြစ် သွားတယ်။ ဒီနေ့့မနက်ကြတော့ တစ်ယောက်သောသူရဲ့ ဒီသီချင်း ငြီးလိုက်တဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်မရဲ့ ဘလောခ့်မှာ တင်ချင်စိတ်ပေါက်သွား မိတယ်။ ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်း တော်တော်များများ ကတော့ ဒီသီချင်းကို အတော်လေး ကြိုက်နှစ်သက် ကြပါတယ်။ သိကြမှာပါ။ တရုတ် သီချင်းကို ကေအေတီက မြန်မာမှု့ ပြုထားတဲ့ ၀ိုင်းဝိုင်းရဲ့ နာမည်ကြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း
၀မ်းနည်းတတ်သူကို မင်းထပ် မနှိပ်စက်နဲ့ တော့..
အချစ်က ကိုယ့်အတွက်ဆို ... အမြဲတမ်းရှုံးမဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခု
နောက် တစ်ခေါက်မရှုံးချင်ပါ.. မင်း ငါ့အတွက် မတွေးနဲ့ တော့
ဟိုအဝေးဆုံး တစ်ဖက်မှာ... နင်ဘ၀ကို ပြန် အသစ်စ ...
မင်းကြောင့်သာ မပြောရက်ပါ... ဒီလိုအဆုံးသတ်ဖို့ အကြောင်း ရှိခဲ့လိုပဲ..
ဒီလို ဇာတ်သိမ်းဖို့ ပညတ်ထား...
နောက်လူ ရင်မှာ .. ပျော်နိုင်မှာပါ... ငါ့အနားမလာနဲ့တော့
ခုလို ပြောတာ မချစ်လို့ မဟုတ်ဘူးနော်..
သိပ်မကြာခင် မှာ အဆင်ပြေမှာပါ .. ငါ နားလည်ပြီးသား
မင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့စည်း ခြားနေပြီကွာ...
ခြောက်သွေ့ သစ်ပင်တောင် ... အမြဲထာဝစဉ် မခြောက်ခန်းဘူး
တစ်နေ့တော့ မိုးထဲမှာ ... အမွှေးဆုံး ပန်းများ ပွင့်လန်းလို့
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ရင်ခွင် ... မင်းမှေးစက် အိပ်လိုက်တော့
မဝေးသော တို့အတိတ်ဟာ ... အိမ်မက်လိုသာ ကျန်ရစ်ခဲ့
မင်းကြောင့်သာ မပြောရက်ခဲ့ပါ... ဒီလိုအဆုံးသတ်ဖို့ အကြောင်း ရှိခဲ့လိုပဲ..
မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့တဲ့ တို့ ကံတရား...
နောက်လူ ရင်မှာ .. ပျော်နိုင်မှာပါ... ငါ့အနားမလာနဲ့တော့...
အခုလို ပြောတာ မချစ်လို့ မဟုတ်ဘူးနော်..
သိပ်မကြာခင် မှာ အဆင်ပြေမှာပါ .. ငါနားလည်ပြီးသား..
ဒီလို မင်းတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ အပြစ်ငါ မပြောရက်ခဲ့ပါ
မလွန်ဆန်ရဲတဲ့ ကံတရား.. လှည့်စား...
နောက်လူ ရင်မှာ ... ပျော်နိုင်မှာပါ... ငါ့အနားမလာနဲ့တော့...
သိပ်မကြာခင် မှာ အဆင်ပြေမှာပါ ... ငါနားလည်ပြီးသား..
Posted by Nay Nay Naing at 2/03/2007 10:51:00 AM3comments
အထက်တန်းကျောင်းတက်တုန်းက သင်ရတဲ့ ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက အဓိပ္ပါယ်ကို နားမလည်ဘဲ သင်လို့ သာ ကျက်မှတ် ခဲ့ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အွန်လိုင်း Status မှာတင်ထားတဲ့ စာသားတွေကြောင့် ဒီကဗျာနဲ့ပြန်ပြီး ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်။ တုံးတယ်ပဲ ပြောရမလား၊ ပထမဆုံး ဒီကဗျာကို ပြန်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်က ဘာကို ဆိုလိုမှန်း သိပ်သဘောမပေါက်ခဲ့ ပါဘူး။
နောက်ပိုင်း ကဗျာလေးကို သေချာဖတ် ကြည့်ပြီး ဘာကိုဆိုလိုလည်း သဘောပေါက်သလိုလို ရှိလာတဲ့ အခါ ဒီကဗျာလေးကို ကျွန်မ နှစ်သက်လာပါတယ်။ ဟိုတလောကတော့ ဒီကဗျာကို မြန်မာဘာသာပြန် ထားတာလေးကို စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ တွေ့ လိုက်ရလို့မှတ်သားထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီကဗျာနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တော့ မသိဘူး၊ ကျွန်မ တွေးမိတာ တစ်ခုက.... ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ အားလပ်ချိန်ကို ရအောင်ယူပြီး စိတ်ကို ကြည်လင်အောင်နေတယ် ဆိုတာ တကယ်တော့ ကာယကံရှင် အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ အားလပ်ရက်တွေ ယူပြီး ခရီးတွေသွားနေမှ၊ တစ်နေ့ မှာ အားလပ်ချိန်ဆိုပြီး ၂ နာရီ ၃ နာရီလောက် အနည်းဆုံးယူနိုင်မှ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်နေရမှ ဘ၀တွေက နေပျော်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေပါစေ တစ်နေ့ တာ လုပ်စရာတွေကို လုပ်နေရင်းနဲ့ ပဲ ရနိုင်တဲ့ အချိန်လေးမှာ ပတ်ဝန်းကျင် အလှအပကို ခံစားပါ၊ အတ္တတွေ၊ ငါမှငါဆိုတဲ့ မာနတွေ၊ လိုချင်တက်မက်မှု့ တွေကို လျှော့ပြီး ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေကို တန်ဖိုးထား၊ စိတ်ကြည်နူး ပျော်ရွှင်အောင်၊ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ကျေနပ်မှု့ ရှိအောင် နေမယ်ဆို လူ့ ဘ၀ကြီးက နေပျော်မှာပါ။
ကိုယ်လိုချင်တာ တစ်ခုအတွက် တစ်ပတ် ၇ ရက် အလုပ်လုပ်ပြီး နားချိန်မရှိဘူး ငြီးနေသူများကို တော့ ဘာမှ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ :D
ဘာသာပြန်သူ - ဒေါက်တာမောင်ဖြူး
ဘာ ဘ၀လဲ ကြောင့်ကြဌေးအင်၊
တွေ့ သားစမ်းအိုင် မထိုင်သာချေ။
စောင့်ဆိုင်းဖို့ ရာ ချိန်ပိုမရ။
Posted by Nay Nay Naing at 2/02/2007 10:30:00 AM0comments
(1st Feb 2006 - 1st Feb 2007)
ဒီနေ့ မှာ .....
ဘလောခ့် မှန်မှန်ရေးဖြစ်အောင် အမြဲတမ်း အားပေးသူတစ်ယောက် ...
ဒီဘလော့ခ့် စရေးတဲ့အချိန်ကနေ ဒီနေ့ အထိ
ကျွန်မဘာတွေပဲ ရေးရေး၊ ဘာတွေမှ မရေးပဲနေနေ
အမြဲတမ်းလာ ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းများ ... နဲ့ 
ဘလောခ့် အလည်လာ မိတ်သဟာ အပေါင်း ကို
Posted by Nay Nay Naing at 2/01/2007 05:07:00 PM 8 comments
အလုပ်မှာ Production Deployment တစ်ခုရှိလို့တစ်ဖွဲ့ လုံး Stand By နေလိုက်ရတာ၊ Testing အားလုံးပြီးလို့ပြန်နိုင်ပြီလို့သိရတဲ့ အချိန်က ည ၁၁း၃၀ကျော်၊ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်ကြတော့ ည ၁၂ ကျော်ပြီး နောက်တစ်နေ့ ကို ကူးသွားပါပြီ။
ဒီ အလုပ်မှာ ပထမဆုံးကြုံရတဲ့ Production Deployment ပါ။ ကျွန်မရဲ့ Item တွေက Minor Changes တွေဆိုတာ Testing က တစ်နာရီ မကြာဖူး ပြီးသွားပေမယ့် System တစ်ခုလုံး Testing လုပ်ပြီးမှသာ အားလုံးပြန်ကြရမှာမို့တခြားသူတွေ ပြီးတဲ့ အထိ စောင့်နေခဲ့ရတာပါ။ Senior တွေက ပြောပါတယ်၊ ဒီနေ့Deployment မှာ Minor Releases တွေပဲပါပြီး၊ တခြား ဘာပြဿနာမှမတတ်လို့၁၁း၃၀ မှာပြန်လို့ ရတာပါတဲ့။ ဒါအတော် စောတယ် ပြောပါသေးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက Deployemnt နေ့ ကတော့ သူတို့ တွေ ည ၁၂း၃၀ မှ ပြန်လို့ ရတယ် ပြောပြပါတယ်။ နောက်လ Production Deployement မှာ Major Releases အများအပြား ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကျွန်မ လုပ်ရမယ် Major Changes2ခု Release လည်းပါ တယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီနေ့ မှာ ည၁၂ ကျော်လောက် အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရနိုင်လောက်တယ်။
မနေ့ က အလုပ်မှာ သူများတွေ ဒီလို အလုပ်များနေခဲ့ကြတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ Company မှာ Production Deployment ကို တစ်လမှာ တစ်ခါ ထက်ပိုပြီး မလုပ်ရဘူး၊ တစ်ခါနဲ့ တစ်ခါ အနည်းဆုံး ရက် ၃၀ လောက်ခြားမယ်ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းလေးရှိနေလို့တော်သေးတယ် ဆိုရမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 2/01/2007 10:37:00 AM0comments
Free Color-Extraction Tool
ဒီနေ့ တွေ့ တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ Website လေးကတော့ ပုံတွေ၊ အရောင်တွေနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မလို့အရောင်တွေနဲ့အလှအပဆင်လုပ်ရာမှ ပါရမီမပါသူတွေ အတွက်တော့ အသုံးဝင် လောက်ပါတယ်။ ဘလောခ့် မှာ အရောင်လေး ပြောင်းမယ် စိတ်ကူးနေတာ ကြာလှပြီ၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်အရောင်နဲ့ဘာနဲ့့ စပ်ရင် လှမှန်း မသိတာနဲ့ခုချိန်ထိ မပြောင်းနိုင်သေးပဲ ကျွန်မရဲ့ ဘလောခ့်က အရင် အတိုင်းရှိနေတာ အချိန်အတော်ကြာပါပြီ။
ဒီနေ့ တွေ့ တဲ့ WebSite က ပုံလေတစ်ပုံရဲ့ လင့်ကိုပေးလိုက်ရင် အဲ့ဒီပုံထဲမှာပါတဲ့ အရောင်တွေကို ပြပေးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အခုလက်ရှိ profile မှာ တင်ထားတဲ့ပုံလေးကို ထည့်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဒီလိုလေးပြပေးတာတွေ့ ရတယ်။ ဒီတစ်ခုနဲ့ တင် ကျွန်မ အတွက် တော်တော် အသုံးဝင်နေပါပြီ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရောင်တွေနဲ့လှနေတဲ့ ပုံလေးတွေ သုံးပြီး အရောင်လှလှလေးတွေ ကိုရှာကြည့်လို့ ရသွားပြီ။
Pic2Color က ပေးမယ့် Feature တွေကတော့
* pic2color Wordpress themes. (Coming really soon!)
* pic2color your blogs. (Working)
* pic2color your webpages. (Working)
Visit pic2color.com for Details.
သူတို့Blog မှာ သွားကြည့်ရင် Wordpress မှာဆို ရွေးလိုက်တဲ့ ပုံပေါ်မူတည်ပြီး WebPage ရဲ့ အရောင်တွေ ပြောင်းသွားတာတွေ့ ရတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဒါမျိုးတွေ လုပ်ဖို့သိပ်စိတ်မရှည်လှဘူး။ အရောင်တွေနဲ့ပျော်မွေ့ သူများ၊ အလှအပ နှစ်သက်သူများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ စပ်စုတတ်သူများ ဒီ Pic2Color - Blog မှာ စမ်းသပ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Source : Pic2Color , Pic2Color Slim, Pic2Color's Blog
Posted by Nay Nay Naing at 2/01/2007 09:35:00 AM0comments